पृथ्वीको आकाशगंगामा 'सुपरम्यासिभ ब्ल्याकहोल'
अमेरिका/जापान । जापानका खगोलविद्हरुले तारामण्डलमा सम्भावित ब्ल्याकहोल पत्ता लगाएका छन् । उनीहरुका अनुसार सुपरम्यासिभ ब्ल्याकहोलको विकासको मुख्य सम्बन्धको रुपमा उनीहरुले यसलाई लिएका छन्, जुन सैद्धान्तिक रुपले भनिँदै आए पनि आधिकारिक रुपले पत्ता लागेको थिएन । मध्यमखालको ब्ल्याकहोलहरुलाई विश्वब्रह्माण्डीय विकासको सम्बन्धसेतुका रुपमा पनि लिइन्छ ।
साइन्स म्यागजिनका अनुसार यी ब्ल्याकहोलहरु पत्ता लगाउन कठिन हुने गर्छ किनभने यिनीहरुसँग आफ्नै प्रकाश हुँदैन । तर अन्य वस्तुको आधारमा पत्ता लगाउन भने सकिन्छ । यद्यपि यी ब्ल्याकहोलको ठोस प्रमाण भने पाउन बाँकी नै छ ।
नेचर एस्ट्रोनमीमा प्रकाशित अध्ययनअनुसार गत वर्ष जापानको योकोहामामा रहेको केइयो विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरुले हाम्रो तारामण्डलको केन्द्रनजिकै ग्यासको अनौठो पारमाणविक बादल रहेको पाएका थिए । त्यसमा ठूलो र फराकिलो क्षेत्रसम्म उक्त ग्यास बादलको हलचल पत्ता लागेको थियो । जसको आधारमा वैज्ञानिकहरुले उक्त बादलपुञ्जलाई एक लाख सूर्यभन्दा ठूलो आकारको ब्ल्याकहोल मानेको साइन्समा रिपोर्ट गरिएको छ ।
पृथ्वीको आकाशगंगालाई 'मिल्की वे' भनिन्छ । सबैभन्दा ठूला ब्ल्याकहोलहरुलाई सुपरम्यासिभ ब्ल्याकहोल भनिन्छ । यो सुपरम्यासिभ ब्ल्याकहोल एक लाख सूर्यबराबरको हुन्छ । वैज्ञानिकहरुका अनुसार हरेक ग्यालेक्सी (आकाशगंगा)को मध्यविन्दुमा एउटा सुपरम्यासिभ ब्ल्याकहोल रहेको हुन्छ । मिल्की वे ग्यालेक्सीको केन्द्रमा पनि सागिटारिअस ए नामको सुपरम्यासिभ ब्ल्याकहोल रहेको वैज्ञानिकहरुको कथन छ । यसभित्र थुप्रै लाख पृथ्वीहरु अटाउनसक्छन् ।
त्यसपछि अनुसन्धाताहरुले ग्यासको अध्ययनलाई निरन्तरता दिँदै जाँदा त्यहाँ रेडियो तरंग पत्ता लागेको थियो जुन सागिटारिअस एजस्तै मिल्दोजुल्दो रहेको थियो । त्यो रेडियो स्रोत नै सुपरम्यासिभ ब्ल्याकहोल रहेको बताइएको छ । उक्त ब्ल्याकहोल मिल्की वेको बीचमा रहेको मानिएको छ तर एकदमै पाँच सय पटक कम प्रकाश दिने खालको ।
सागिटारिअस ए र नयाँ पाइएको ग्यासबीचको समानताले उक्त ग्यास आईएमबीएच अर्थात् इन्टरमिडियट म्यासिभ ब्ल्याकहोल नै भएको पुष्टि गर्छ । विश्वब्रह्माण्डको मुख्य भागमा लाख सूर्यभन्दा ठूलो ब्ल्याकहोल लुकेर रहेको उक्त अध्ययनमा बताइएको छ । यद्यपि यी ब्ल्याकहोलको उत्पत्तिकथा भने अहिलेसम्म पत्ता लाग्नसकेको छैन । सैद्धान्तिक अध्ययनहरुले मिल्की वेमा एक सय मिलियनदेखि एक बिलियनसम्म ब्ल्याकहोलहरु रहेको अनुमान गरेको छ । यद्यपि मात्र ६० ब्ल्याकहोलमात्रै अहिलेसम्म पहिचान गरिएको छ । खगोलविद्हरुले उक्त ग्यासबारे थप अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।
के हो मिल्की वे ?
मिल्की वे भनेको आकाशगंगा हो । जसले पृथ्वीको सौर्यव्यवस्था समावेश गर्छ । पृथ्वीबाट रातको समयमा आकाशमा देखिने ताराहरुको बाक्लो समूह, जसलाई नांगो आँखाले देख्न सकिँदैन । वैज्ञानिक ग्यालिलियो ग्यालिलीले प्रकाशको फित्ताजस्तो देखिने ताराहरुको पुञ्जबारे सन् १६१० मा आफ्नो टेलिस्कोपबाट समाधान निकालेका थिए । त्यतिबेलासम्म प्रायः मानिसहरु त्यही मिल्की वेले सबै विश्वब्रह्माण्डीय ताराहरु समेटेको विश्वास गर्दथे । तर १९२० मा अन्तरिक्षयात्रीहरु हार्लो शेपले र हेबर कर्टिसबीच ठूलो विवाद भयो भने एडविन हब्बलले सोही विवादका बीच मिल्की वे भनेको विश्व ब्रह्माण्डमा भएका धेरै ग्यालेक्सी(आकाशगंगा)मध्ये एक रहेको निष्कर्ष निकालेका थिए ।
मिल्की वे तारा नै ताराहरु एक लाखदेखि एक लाख ८० हजार प्रकाशवर्षको व्यास (मोटाइ)मा गुडुल्किएको आकाशगंगा हो । यसभित्र कम्तीमा पनि एक सयदेखि चार सय बिलियन ताराहरु रहेको अनुमान गरिएको छ । मिल्की वेमा कम्तीमा पनि एक बिलियन ग्रहहरु रहेको वैज्ञानिकहरु बताउँछन् । हाम्रो सौर्यप्रणाली मिल्की वेभित्र गालाक्टिक सेन्टरबाट २६ हजार प्रकाशवर्ष टाढा रहेको मानिन्छ । गुजमुज्ज आकारमध्येको एक भित्री भाग जहाँ ग्यास र धूलो रहेको छ । यसलाई ओरियन आर्म पनि भनिन्छ । यसको भित्री भागलाई एउटा इन्टेन्स रेडियो सोर्सले घेरेको छ, जसलाई सागिटारिअस ए भनिन्छ र त्यसैलाई सुपरम्यासिभ ब्ल्याक होल भन्ने गरिन्छ ।
माथिको तस्बिरमा रातको समयमा देखिएको मिल्की वेको गालाक्टिक सेन्टर । तस्बिर : विकिपेडिया
के हो ब्ल्याकहोल ?
ब्ल्याकहोल भनेको अन्तरिक्षमा रहेको ठाउँ हो जहाँ गुरुत्वाकर्षण बलले सबै कुराहरु आफूतिर तान्छ । ब्ल्याकहोलमा पसिसकेपछि प्रकाश पनि बाहिर आउन पाउँदैन । यसमा गुरुत्व बल एकदमै बलियो हुन्छ किनभने एउटा सानो स्पेसमा वस्तुहरु खाँदिएर रहेका हुन्छन् । मानिसहरुले ब्ल्याकहोल देख्न सक्दैनन् । तिनीहरु अदृश्य हुन्छन् । विशेष क्षमतायुक्त कुराहरु जडान गरिएको अन्तरिक्ष टेलिस्कोपले मात्रै ब्ल्याकहोल पत्ता लगाउन सक्छन् । त्यस्ता विशेष कुराहरुले ताराहरु जो ब्ल्याकहोल नजिकै रहेका हुन्छन्, तिनले अन्य ताराहरुले भन्दा भिन्न संकेतहरु देखाउँछन् ।
कति ठूला हुन्छन् ब्ल्याकहोलहरु ?
ब्ल्याकहोलहरु ठूला र साना दुवै खाले हुनसक्छन् । वैज्ञानिकहरुका अनुसार सानामा यतिसम्म साना हुन्छन् कि एउटा अणुजत्रा पनि ब्ल्याकहोल हुनसक्छन् । यिनीहरु एकदमै साना हुने भए पनि ठूला पर्वतहरुको समूहहरु यसभित्र हुनसक्छन् । अर्को खाले ब्ल्याकहोललाई स्टेलार भनिन्छ । यसको समूह सूर्यभन्दा २० समय ठूला हुन्छन् ।
मिल्की वे ग्यालेक्सीको केन्द्रमा रहेको सागिटारिअस ए नामको सुपरम्यासिभ ब्ल्याकहोल । स्रोत : नासा
पृथ्वीको आकाशगंगामा धेरै स्टेलारहरु रहेको अनुमान गरिएको छ । पृथ्वीको आकाशगंगालाई मिल्की वे भनिन्छ । सबैभन्दा ठूला ब्ल्याकहोलहरुलाई सुपरम्यासिभ ब्ल्याकहोल भनिन्छ । यो सुपरम्यासिभ ब्ल्याकहोल एक लाख सूर्यबराबरको हुन्छ । वैज्ञानिकहरुका अनुसार हरेक ग्यालेक्सी (आकाशगंगा)को मध्यविन्दुमा एउटा सुपरम्यासिभ ब्ल्याकहोल रहेको हुन्छ । मिल्की वे ग्यालेक्सीको केन्द्रमा पनि सागिटारिअस ए नामको सुपरम्यासिभ ब्ल्याकहोल रहेको वैज्ञानिकहरुको कथन छ । यसभित्र थुप्रै लाख पृथ्वीहरु अटाउनसक्छन् । यो चार मिलियन सूर्यहरुको थुप्रो बराबरको रहेको वैज्ञानिकहरुको स्वीकारोक्ति छ ।
ब्ल्याकहोल कसरी बन्यो ?
वैज्ञानिकहरुका अनुसार सबैभन्दा सानो ब्ल्याकहोल संसार बन्दादेखि नै सुरु भयो । स्टेलार ब्ल्याकहोलहरुचाहिँ एकदमै ठूला ताराहरुको केन्द्रहरु आफैँमाथि खप्टिनथाले । यस्तो प्रक्रियाले सुपरनोभा हुन्छ । खास गरी अन्तरिक्षमा ताराहरुको विस्फोटनले अन्य ताराका भागहरु चोइट्याउने प्रक्रियालाई सुपरनोभा भनिन्छ । आकाशगंगा (ग्यालेक्सी)सँगै सुपरम्यासिभ ब्ल्याकहोल पनि बन्दै गएको हुनसक्ने वैज्ञानिक मत रहेको छ । जब एउटा ब्ल्याकहोल र एउटा तारा संगै हुन्छन्, त्यहाँ उच्च शक्तियुक्त प्रकाश बन्छ । तर त्यसलाई मानवीय आँखाले देख्न सक्दैन । वैज्ञानिकहरुले भने स्याटेलाइट र टेलिस्कोपले अन्तरिक्षबाट त्यस्तो उच्च शक्तियुक्त प्रकाश देख्न सक्छन् ।
के ब्ल्याकहोलले पृथ्वीको विनाश गर्छ ?
अन्तरिक्षमा ब्ल्याकहोलहरु तारा, चन्द्रमा र ग्रहहरु निल्दै हिँड्दैन । वैज्ञानिकहरुका अनुसार पृथ्वी ब्ल्याकहोलमा कहिल्यै खस्दैन किनभने हाम्रो सौर्यप्रणाली नजिक कुनै पनि ब्ल्याकहोल छैनन् । यति हुँदाहुँदै पनि यदि सूर्यकै आकारको ब्ल्याकहोल भए पनि पृथ्वी त्यसमा खस्दैन किनभने सूर्यको जस्तै ब्ल्याकहोलको पनि उही क्षमताको गुरुत्वाकर्षण बल हुन्छ भने पृथ्वी र अन्य ग्रहको पनि नक्षत्रमार्ग सूर्यको जस्तै छ । सूर्य कहिल्यै ब्ल्याकहोलमा परिवर्तन पनि हुनसक्दैन । किनभने सूर्य आफैँमा ब्ल्याकहोल हुनसक्ने तारा होइन ।
(स्रोत- नासा), (फक्स न्युज डटकम) र विकिपेडियाबाट भावानुवाद गरिएको हो ।
सुपरम्यासिभ ब्ल्याकहोलले तारा निलेको दृश्यले चकित भए अनुसन्धानकर्ताहरु
एउटा सुपरम्यासिभ (भयंकर विशाल) ब्ल्याकहोलले तारा निलेको देखेर अनुसन्धाताहरु चकित भएका छन् । स्पेनको ग्रानाडामा रहेको एष्ट्रोफिजिकल इन्स्टिच्युट अफ आन्डुलुसियाका वैज्ञानिकहरु र फिनल्यान्डको युनिभर्सिटी अफ टुर्कुका वैज्ञानिकहरु गरी जम्मा ३६ जनाको
ब्रह्माण्डमा ब्ल्याकहोलहरु ‘जति ठूलो, उति चाँडो’ गतिमा वृद्धि, खगोलशास्त्रीले कारण पत्ता लगाउन सकेनन्
ब्रह्माण्डका सुरुवाती अवस्थामा विशाल ब्ल्याकहोलहरुको अस्तित्वबारे खगोलविदहरु त्यति आश्चर्यचकित र जिज्ञासु थिएनन्, जति आज छन् । सन् २००६ यता मात्रै करिब एक बिलियन अर्थात् एक अर्ब सूर्यहरु अटाउने यस्ता अति
अमेरिका/जापान । जापानका खगोलविद्हरुले तारामण्डलमा सम्भावित ब्ल्याकहोल पत्ता लगाएका छन् । उनीहरुका अनुसार सुपरम्यासिभ ब्ल्याकहोलको विकासको मुख्य सम्बन्धको रुपमा उनीहरुले यसलाई लिएका छन्, जुन सैद्धान्तिक रुपले भनिँदै आए पनि आधिकारिक रुपले